Isikram - I-SCALE design ye-FREE - ITS Tech School
Isikram - I-SCALE FREE design
Isikram - I-SCALE yoyilo lwe-FREE-Scrum Training
IMicrosoft yenza loo nto. I-Shu yi-learners state (i-20% yatshintsha, i-Ha yindawo ephakathi (> 200% yatshintsha) kunye neR im imeko yegunya (> 400% utshintsha utshintsho kunye nexesha lokuvakalisa). UMthetho kaMorey.
UMthetho kaMoore ubalulekile ekuqondeni ukuba kutheni isikram sekhanda kunye nokuba kutheni sikali. Ngokwenene, Ngo-1965 umxhasi oyintloko wokuqala we-Intel Gordon Moore wayebukele ukuba ubungakanani bezitshintshi kwi-chip banda ngokufana neefowuni. Oku kuye kwaqhubeka iminyaka engama-50. Umba wukuthi ukuphuculwa kwemveliso kwakungenalo hlobo lokuphuhliswa kwemveliso, kunokuba luphuhlise ngokwenene. Kwi-1993, xa i-Scrum yenziwe, ndifanele ndibe ngumhlali weBhodi yokuLawula i-Object board of trustees kulo mbandela. Silindelwe ukufumana inkqubo kwi-bend yokudalwa kwendalo. Iingcali kunye neenkqubo zengcali zebhunga zidibanise ukuba zenzele ingqiqo kwaye ndaqulunqa amaphepha ambalwa kulo msebenzi, umzekelo "Ukuveliswa kweeNkqantosi zeeNkampani zeBusiness" kwaye "Kutheni ndiyathanda i-OMG."
Oko bafunda kwi-Intel - IZINTO EZINTLOKO!
Kwi-2016 Construx Software Executive Summit e Seattle, ndidibana novulindlela wase-Agile evela ku-Intel owaxhoma abaqulunqi be-25,000 benza i-Scrum. Ukutshintsha abaguquleli kwi-chip kuye kwaba kwi-DNA ye-Intel kuba omnye wabaququzeleli wayenomthetho kaM Moore. Ubungqina bokuba ngu-Agile wachaza ukuba i-Intel yafumanisa ukuba "akukho zikala" kwaye ufuna i-"SCALE FREE" ukuyiqwalasela umcimbi. Iwebhu imifanekiso enye kunye neSkram enye.
Indlela Ongayichazela Ngayo Xa Isikhwama Sakho SIKHULULEKILEYO
Xa sahambisa iphepha eliphambili kwi-IEEE Digital Library kwiqela eliye lasasazwa ngaphaya kweMntla Melika kunye neRashiya, abachazi beemfundo baqwalasela ukuba abantu abaninzi babonakalise inzuzo ephuculweyo kunye nokuphuculwa kwenkqubo kodwa akukho mntu wayedlulisela iphepha elibonisa ngokuthe tye. I-Scrum Distributed: Ulawulo lwe-Agile Project kunye namaqela oPhuhliso oluPhucukileyo lubonise ukuba ukuphindaphinda ubuninzi bamaqela ngokunyusa amaqela eRussia kwi-intanethi enkulu ye-US / yaseCanada yokunyusa intsebenzo eyenziwe ukuba ibe ngaphezu kokuphindaphinda kwesizukulwana jikelele.
Kuyo yonke imbali yophuhliso lweprogram, le mangaliso yokulungelelaniswa ngokuthe ngqo kuvele kuboniswe kwi-Scrum. Ngomnye umzekeliso ubone i-Scrum kunye ne-CMMI Level 5: I-Potion Magic ye-Code Warriors. Kungenxa yezizathu zokuthi iSkram, xa senziwe ngokufanelekileyo ISIKHALA SOKUBHALA ngokubhaliweyo.
Uninzi lweziKhokelo zokuHlola aluHLELEKILEYO
Unokukwazi ukuba isakhiwo sokwenza umonakalo sibuhlungu xa usebenze ngokungafezekanga utshintsho lwe-400% kwaye xa uquka amaqela amaninzi, inzuzo ayiyi kunyuka ngokuthe ngqo. Awusoze ufumana amaqela akho ISIKHALA SAMAKHALA ngaphandle kokuba uyayiqonda uMthetho kaMore kwaye ulungise ngokucwangcisa. Oku kumangalisa kufumaneka kumaqela angaphandle kweprogram njengoko kukhululekile.
I-10 Izizathu zokufumana i-Scrum Master Certification